China Passenger Car Association သည် မေလ အတွက် China NEV အရောင်း အဆင့်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည် - Pandaily
China Passenger Car Association သည် မေလ အတွက် China NEV အရောင်း အဆင့်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည်
Jun 10, 2022, 20:27ညနေ 2022/06/10 23:12:36 Pandaily
အရChina Passenger Car Association မှ စာရင်းအင်း များ ထုတ်ပြန် သည်သောကြာ နေ့တွင် မေလတွင် ပြည်တွင်း ခရီးသည်တင် ကား ရောင်းအား သည် ၁. ၃ ၅၄ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၆. ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဇန္န၀ါရီ မွ ေမ လအထိ ခရီးသည္တင္ ကား အစီးေရ ၇ ဒသမ ၃ ၁၅ သန္း ေရာင္းခ် ခဲ့ရၿပီး ယခင္ႏွစ္ ထက္ ၁၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့သည္။
စွမ်းအင် သုံး မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက် အသစ် တွင် မေ လက ထိပ်တန်း စွမ်းအင် သုံး မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ ၁၅ ဦး မှာ BYD, SAIC, GM Wuling, GAC AION, Chery, Geely, Changan Automobile, Li Automobile, Great Wall Automobile, Haozong Automobile, Xiaopeng, Feiyue Automobile, Tesla, FAW-Volkswagen, NIO နှင့် Cerris တို့ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ရောင်းအား အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် သုံး မော်တော်ယာဉ် သုံး စီး မှာ Wuling Hongguang Mini EV, BYD Han နှင့် BYD Qin တို့ဖြစ်ပြီး ၂၉, ၁၆ ၉၊ ၂ ၃၉ ၃၄ နှင့် ၂၀, ၇ ၅၃ အသီးသီး ရောင်းချခဲ့သည်။
မေလတွင် အရောင်း ရ ဆုံး စွမ်းအင် SUVs အသစ် များမှာ BYD Song ၊ BYD Plus နှင့် Li ONE တို့ဖြစ်ပြီး ၃ ၁၉၇၇ ၊ ၁၁, ၅၀၀ နှင့် ၁၁, ၄ ၉၆ အသီးသီး ရောင်းချခဲ့သည်။ Huawei ၏ အားတက်သရော မြှင့်တင် မှုကြောင့် AITO M5 သည် ယခုလ တွင် ယူနစ် ၅၀ ၃၃ ဖြင့် ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင် ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ယခုႏွစ္ ပထမ ငါး လအတြင္း AITO M5 အလံုးေရ ၁၃, ၁၉၉ လံုး ေပးပို႔ ႏိုင္ခဲ့သည္။ Tesla ၏ အဆင့်သတ်မှတ် ချက်သည် ရောဂါဖြစ်ပွား မှုကြောင့် ကျဆင်းခဲ့ပြီး Model 3S ၃၉ ၅၀ နှင့် Model YS ၅၈ ၇၅ ခုသာ ရောင်းချခဲ့သည်။
မေလတွင် စုစုပေါင်း စွမ်းအင် ယာဉ် ၃၉ ၀၀၀ ကိုတင် ပို့ ခဲ့သည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး မူဝါဒ ၏ ပံ့ပိုးမှု ဖြင့် SAIC Group သည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၈၂ ၁၂ စီး၊ တက် စ လာ တရုတ် ၂၂, ၃၄၀ ၊ Geely ၁၇ ၈၆ နှင့် BYD ၄၁ ၅ တို့ကို တင်ပို့ ခဲ့သည်။ တျခား ကား ကုမၸဏီ ေတြကလည္း ပို႔ကုန္ ေတြ တိုးျမႇင့္ တင္ပို႔ လာ တယ္။
မေလ လယ် တွင် CPCA မှ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ လက်လီ ရောင်းချ မှုသည် ၁၉ သန်း ရှိ မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ ၀ ယ်ယူ မှု အခွန် မက်လုံး များကဲ့သို့သော မူဝါဒ အသစ်များ ကိုအကောင်အထည်ဖော် ခြင်းအားဖြင့် တရုတ် မော်တော်ယာဉ် စားသုံးသူ အသင်းက စားသုံးမှု ကိုမြှင့်တင်ရန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်း မှု များနှင့်အတူ ယခုနှစ် ကျန် ၇ လအတွင်း ပြည်တွင်း မော်တော်ယာဉ် လက်လီ ရောင်းချ မှုသည် ၂၁ သန်း အထိရောက်ရှိ လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။